Prairie State inobata mhosva dzematsotsi here?
Kwete Prairie State haimiriri vanopomerwa mune chero mhosva kana traffic traffic. Uye zvakare, Prairie State haibate nyaya dzekodzero dzekubvisa pamuviri, zvematongerwo enyika kudzikamisa nyaya, sarudzo dzebasa, kana euthanasia (kuuraya tsitsi)
Nyika yePrairie inzvimbo yehurumende here?
Kwete. Prairie State inogamuchira imwe hurumende mari yebasa rayo, asi Prairie State isangano rakazvimirira risingabatsiri.
Ko Prairie State inobhadharisa fizi here kana ine chiyero chinotsvedza?
Kwete Prairie State haibhadharise vatengi kune ayo masevhisi. Kuti ugamuchire rubatsiro kubva kuPrairie State, zvakadaro, vatengi vanofanirwa kuve nemari vanokodzera masevhisi kana kukodzera pasi pemitemo yechirongwa chakakosha.
Ndine mvumo here kugweta kuti rindimiririre kudare?
Iwe unogona kunge wakanzwa aya mazwi paterevhizheni: "Une mvumo yekunyarara. Une mvumo kugweta. Kana iwe usingakwanise kubhadhara gweta, mumwe achagadzwa iwe. ” Zvisinei, kodzero idzodzo dzinongoshanda chete kumatare edzimhosva. MuUnited States, kazhinji hapana kodzero yekuve negweta rinobhadharirwa nehurumende kana nedare mune dzakawanda nyaya dzevanhu.
Inonzi Prairie State inotora ese kesi?
Kwete. Prairie State ine zvishoma zviwanikwa. Hatina vashandi vakakwana kana magweta evanozvipira kutora nyaya dzese kana kuenda kudare nevatengi vese vanokodzera.
Hatisi kuzoramba rubatsiro pahwaro hwerudzi, ruvara, nyika mavambo, bonde, zvebonde, zera, chinamato, kubatana kwezvematongerwo enyika kana kutenda, kuremara kana chero chimwe chikamu chakachengetedzwa nemutemo.
Ndiani anokodzera rubatsiro kubva kuPrairie State?
Ona vedu Zvinokodzera Zvinhu kudzidza zvakawanda.
Ko Prairie State ine chinyorwa chekumirira rubatsiro rwemutemo here?
Mamwe mahofisi ane zvinyorwa zvekumirira zvisina-emergency zviitiko sekurambana kana kubhuroka. Muzhinji, zvakadaro, Prairie State vatengi vanoda rubatsiro rwekukurumidza, uye nekudaro, zvinyorwa zvekumirira hazvishande kune aya makesi.
Chii chandingaite kana ndisina kufara nechisarudzo chakaitwa nePrairie State kana nezvesevhisi dzinopihwa nePrairie State?
PSLS yakazvipira kupa mhando yepamusoro masevhisi kune vatengi, uye nekuzvidavirira kunharaunda dzePrairie State dzinoshanda uye neavo vanhu vanonyorera masevhisi ePSLS. PSLS ine maitiro ekunyunyuta kune vatengi uye vanyoreri uye inopa nzira yakanaka yekugadzirisa makakatanwa. PSLS zvakare inotarisira kutevedzera Mutemo Services Corporation Mutemo 1621. Kuti utarise Zvichemo zveVatengi uye Vanyoreri gwaro, tinya pano.